လသားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ယောက် နဲ့ ဆင်းဒုက္ခခံသားနေရ တဲ့ ကလေးငယ်ကို ကူညီနိုင် ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Sinon – GaMone Media
လသားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ယောက် နဲ့ ဆင်းဒုက္ခခံသားနေရ တဲ့ ကလေးငယ်ကို ကူညီနိုင် ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Sinon
ယခုလည်း ကလေးငယ်လေးကို ပွေ့ပြီး လမ်းဘေးမှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးငယ်ကို သူကူညီနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူရဲ့ Fb page မှာတော့ .
Ohhhh nooooo !(How we can help these kids? ) ဒီကလေးကို ငါတို့ ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ ဆိုပြီး တင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Sinon အနေနဲ့ ဒီကလေးကို ကူညီနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မဂၤလာပါ ပရိသတ္ႀကီးေရ ယခုေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ ပရိသတ္ေတြ အားလုံးေလးစားခ်စ္ခင္ရတဲ့ Sinon အေၾကာင္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ Sinon ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႏုပညာအလုပ္ေတြ လုပ္ရင္းနဲ႔ သူတတ္ႏိုင္တဲ့ ဘက္ကေန ပရဟိတေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတာ အားလုံးအသိပျဖစ္ပါတယ္။
Sinin ကိုယ္ႏိုင္ကလည္း အိမ္ေျခယာမဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ဘဝကေန တက္လာတာမို႔ အိမ္ေျခယာမဲ့ေတြ႕ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈ ၊ ျဖတ္သန္းရတဲ့ ဒုကၡ ၊ ခံစားရတဲ့ စာေလာင္မႈေတြကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ခံစားခဲ့ရခဲ့ရၿပီး အဲ့လိုဘဝတူေတြ ေတြ႕ရင္ သူအရမ္းခံစားရၿပီး မကူညီပဲ မေနႏိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။
ယခုလည္း ကေလးငယ္ေလးကို ေပြ႕ၿပီး လမ္းေဘးမွာ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ကေလးငယ္ကို သူကူညီႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သူရဲ႕ Fb page မွာေတာ့ .
Ohhhh nooooo !(How we can help these kids? ) ဒီကေလးကို ငါတို႔ ဘယ္လိုကူညီႏိုင္မလဲ ဆိုၿပီး တင္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ Sinon အေနနဲ႔ ဒီကေလးကို ကူညီႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္း ပုံရိပ္ေလးေတြကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
Previous post နှစ်သစ်လေးမှာ ချစ်ရ တဲ့ ဘေဘီရဲ့ပါးပြင်လေး ကို အနမ်းခြွေခဲ့ တဲ့ သာဂန်း
Next post ကိုဗစ်ကြောင့် မိဘမဲ့ ကို ရင်လေးတွေ လည်း ဆွမ်းအခက်အခဲ ဖြစ်နေကြရ ပါ တယ် ဗျာ (ရှယ်ပေးကြပါအုံး)
အမေစု အတွက် ရည်ရွယ်ကာ ရေးထားတဲ့ သံမဏိ လိပ်ပြာ သီချင်းလေးကို လမ်းမထက်မှာ အားမာန်အပြည့် နဲ့ သီဆိုနေတဲ့ G FATT ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
စည်ပင် ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် ဆန် နဲ့ဆီ တွေ ပေးဝေ လှူဒါန်းကာ တက်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်လှုပ်ရှား နေတဲ့ နေဆန်း
မျက် ရည် ယိုဗုံး အတွက် ဗဟု သုတ ပုံလေး တွေပါ
အပြော နဲ့ မဟုတ် ပဲ အလုပ် နဲ့ သက်သေ ပြသွားတဲ့ မုံရွာ လူထုကြီး ရဲ့ ညီညွတ်မှု
ယုံကြည်ချက်တွေ နဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် အစား အသောက်တွေ ဝေငှပြီး အင်အားဖြည့် ပေးခဲ့တဲ့ ဆိုဖီယာ